लकडाउनका कारण धेरैमा मोटोपन समस्या – Milappost
लकडाउनका कारण धेरैमा मोटोपन समस्या
मिलाप पोस्टबुधबार, ०५ कार्तिक, २०७७
लकडाउनका कारण लामो समय जिमहरू बन्द भए। सधैं जिम धाउने धेरैलाई शरीर ‘फिट’ राख्न समस्या भयो। अझ लामो कामकाजमा हिँड्न नपाउँदा र घरमा बस्दा धेरैमा मोटोपन समस्या बनेको छ।तै पनि कोरोनाको डरले अझै बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था छैन। मानिसहरू भिडभाड हुने ठाउँमा जान त्रसित देखिन्छन्। जिम जानेको संख्या ह्वात्तै घटेको छ।
अहिलेको अवस्थामा जि‍म जानु साँच्चैको कत्तिको जोखिमपूर्ण छ त? जिमखानाहरूले के-कस्ता सुरक्षा अपनाएका छन्? के हामी ती सुरक्षाको भरमा जिम जान सक्छौं?यसको उत्तर खोज्दै हामी थापाथलीस्थित ‘फिट्नेस ग्यारेज’ जिममा पुग्यौं। थापाथलीबाट त्रिपुरेश्वर जाने बाटो छेउमा रहेको एउटा भवनको दोस्रो तल्लामा छ यो जिम।
जिमभित्र जाँदा हाम्रो भेट त्यहाँका सञ्चालक सुरेश सुवेदीसँग भयो। उनकै सहायतामा हामीले जिमभित्रको वातावरण के-कस्तो छ बुझ्न पायौं। हामी पुग्दा जिममा एक-दुई मान्छे मात्र थिए।सञ्चालक सुरेश सुवेदीका अनुसार लकडाउनपछि जिमले तीन सिफ्ट छुटाएको छ। जसमा एउटा सिफ्टमा दस जनाभन्दा बढीले जिम गर्न पाउने छैनन्।
जिमभित्र हेर्दै गर्दा हामीले उचित स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएको महसुस गर्यौं। अझ हरेक सिफ्टपछि जिमलाई पूर्ण रुपमा किटाणुनाशक स्प्रे प्रयोग गरेर सफा गरिने सुरेशले जानकारी दिए।